Yakarongedzwa kwakakurudzira Simbi Sheet
ne admin pane 21-02-22
Mushure mezororo, tadzokera kune zvakajairwa nezve basa. Kugamuchirwa kuodha, isu tichavagadzirira munguva. Nenzira, zvigadzirwa zvedu zvikuru zvakakomberedzwa, machira, mapaipi esimbi uye mahwendefa anotonhora anotonhora.
Anofara Mutambo weChirimo kushamwari yega yega!
Shuvira munhu wese anoverenga chinyorwa ichi Gore rinofara reChinese Nyowani uye Zvese zvakanakira gore rinouya. Ndinoda kuumba hukama hwekudyidzana nechero munhu anoda maoresi akakwenenzverwa, makoji akavezwa uye mapaipi esimbi. Rombo rakanaka mugore idzva!
Nekuda kwekukanganiswa kwedenda re-cowid-19, iko kutumira kwacho hakusi panguva
Nekuda kwekukanganiswa kwedenda re-cowid-19, zvimwe zvezvinhu zvedu zvakagadzirwa zviri kushomeka. Nekuda kwehosha iri muXingtai, Hebei Province, zvimwe zvezvinhu zvedu zvakasvibirira hazvigone kutakurwa, saka kutumirwa kwacho hakukwane panguva, ndapota nzwisisa. Ini ndinotenda kuti nekubatana kunoedza mese, isu isu ...
Vhiki nevhiki: Kuumbwa kwesimbi yeChinese simbi zvigayo zvinowedzera ne6.3%
Kubva muna Ndira 13, masosi mashanu esimbi, tambo yewaya, coil inopisa-yakakungurutswa, coil inotonhorera inotonhorera uye ndiro muzvivigiro zvesimbi zvakaongororwa zvakaita matani emamirioni 5.8, kuwedzera kwe6.3% zvichienzaniswa nesvondo rapfuura. Izvo zvinyorwa zvevhiki yapfuura yaive 3.2%. Kukanganiswa kuwedzera COVID-19 zviitiko muna VaH ...
Mwaka Kukwazisa kubva kuLiaocheng Derunying Midziyo uye Zvekushandisa Co.ltd
Na2021 kukona kukona timu yedu inoda kukutendai nekuramba muchitsigira muna 2020. Ndichikushuvirai, mhuri yenyu & shamwari neKisimusi yakanaka uye Gore Rakanaka Nyowani. Tarisira mberi kusangana newe mugore Idzva, Zvakanakisa Best
Yakadzika kudhirowa inotonhora yakakungurutswa simbi jira, yaishandiswa kuEnamel zvigadzirwa-Kudada kwedu
Yakadzika kudhirowa inotonhora yakanyikwa simbi jira, ndiko kudada kwedu, inogona kushandiswa ku enamel prducts, senge inotevera; Aslo, ndapota tsvaga iwo maratidziro sekutevera (zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi):
Spiral welded pombi-kuManila-Gamuchirai vamwe vatengi vataure nesu！
Isu tangosaina chibvumirano nevatengi veManila. Tinogamuchira vatengi vekunze kuti vatibate.
Kwakakurudzira machira kubva Liaocheng Derunying ekisipoti kuenda kuVietnam
ne admin pane 20-10-23
Kuti tikwanise kuzadzisa zvinodiwa nevatengi, zvese mashandiro edu anoitwa zvine mutsindo nemota yedu "Yepamusoro Yemhando, Yekutengesa Mutengo, Yekukurumidza Sevhisi" yemutengo Wakachipa China Zinc Kuchengeta 40-180g / Kwakakurudzira Simbi Sheet, Kambani yedu yakazvipira kupa c ...
Karusiyamu Silicate Board-KUDZIDZISIRA KATI KATI, HCM, VIETNAM
Anofara Mid-matsutso Mutambo
LIAOCHENG KUSVIRA ZVAKANAKA NEZVINODZIDZISWA CO., LTD ropafadzai mose: Anofara Mid-matsutso Mutambo. Iwe unogona kutaura nesu kunyangwe muzororo kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu. Email: xiejing_861208@126.com & dry@derunying.com WeChat: 18865285296
Zvigadzirwa zvinopedzwa sezvakarongwa
Mutengi ane mukurumbira akagadziridzwa Cold Rolled Plate Production sechinhu chakagadzirwa pakugadzira maceramic mahwendefa. Isu tapedza basa sekurongwa uye parizvino takamirira kutumirwa.
Kuneta kwesimba risina musono simbi chubhu kubva kuShandong Derunying inonyanya kujeka kune akasiyana ekunze uye emukati maficha, mune ekunze zvinhu zvinosanganisira chimiro, saizi, kumeso kutsetseka, uye mamiriro ebasa kana zvimwe zvezvikamu, uye zvemukati zvinhu zvinosanganisira kuumbika, .. .